ARETINA KITROTRO : Tsy mianatra sy tsy miasa mandritra ny 15 andro ny olona voany
Manoloana ny fiparitahan’ny valanaretina kitrotro dia manao antso avo amin’ny rehetra ny tompon’andraikitry fahasalamam-bahoaka eto Mahajanga. 9 janvier 2019
Ny talen-tsekoly sy mpampianatra no nafarana fa raha mahita zaza malemilemy na mikohakohaka dia alefa mody avy hatrany, ary angatahana amin’ny ray aman-dreny ny karinem-pahasalamana. Tsy mahazo mianatra mandritra ny 15 andro ny zaza voan’ny kitrotro. Arahi-maso tsara sao alaim-panahy ny ray aman-dreny sasany hamerina ny zanany any an-tsekoly afaka 3 na efatra andro sao heveriny fa sitrana ny zanany, nefa ny fery manomboka mihofakofaka ka mamindra.
Mijanona any an-trano ny zaza voan’ny kitrotro ary tsy averina an-tsekoly raha tsy efa sitrana tanteraka, hoy ny mpitsabo. Tsy mahazo miasa mandritry ny 15 andro kosa ny mpiasa. Raha tsy mitandrina isika dia lasa kilasy iray manontolo na sekoly iray manontolo mihitsy no ho voan’ny aretina, hoy hatrany ny mpitsabo. Taorian’iny aretina pesta iny dia tokony hanana efitra fandraisana ireo mpianatra marary ny sekoly tsirairay ary tokony tandrovina ny fahadiovana eny anivon’ireny sekoly ireny, hoy hatrany ny tompon’andraikitra.
Anisany mandray anjara amin’ny fitsaboana ihany koa i Assanati ka ireo mpikambana ao amin’ny Assanati Famo gidraka sy ny werawera tsy maintsy mandeha izay voan’ny aretina kitrotro dia izy avokoa no miantoka ny mpitsabo sy ny fitsaboana rehetra ary ny fanafody.